Maalin maalmaha ka mid ah ayna tahay goor subax barqin ah ayaa wuxuu Cumeyr aaday Kacbada si uu u soo dhawaafo Kacbada, isla mar ahaantaana u barakeysto sanamyadeeda. Markii uu yimi kacbadii, wuxuu arkay Safwaan Binu Umaya oo ag fadhiya dhagax (Xajarul-aswad). Cumeyr ayaa salaamay Safwaan isagoo ku yiri "Subax wanaagsan". Safwaan ayaa u jawaabay Cumeyr isagoo leh "Subax wanaagsan Cumeyroow". Waxaa fur-furantay sheeko, waxay isla soo qaadeen jabkii iyo dhibaatadii ka qabsaday dagaalkii Badar. Waxay tiriyeen dadkii la qafaashay oo ay qafaasheen Muslimiinta. Waxay si murugo leh ay uga sheekeesteen dadkii gaalada ahaa ee ku dhintay dagaalka, dabadeedna lagu guray ceelkii weynaa dhexdiisa. Safwaan ayaa hadalkii qaatay oo yiri "Wallaahi kheyr kuwaa gadaashood ma ahaanin". Cumeyr ayaa u celiyay "Haa oo waa runtaa". Wax yar ayeey aamusnaayeen ka dibna Cumeyr ayaa yiri "Haddayan jirin deyn laygu leeyahay oo aan cid iga gudda aan jirin iyo caruur aan uga cabsanayo caydh iyo dayac-darro, waxaan aadi lahaa Muxammed si aan u soo dilo". Wuxuu haddana si hoos ahaan u yiri "heesashada ay heestaan wiilkayga ayaa sabab iiga dhigayso inaan saa yeelo". Safwaan ayaa hadalkii ka faa’iidaystay oo wuxuu Cumeyr ku yiri "Cumeyroow waa tan koowaad’e deynta lagugu leeyahay annigaa dusha saartay oo anaa kaa gudaya, tan labaad ee ah ciyaalka, aniga ayaa kuu kafaalo qaadaya noloshooda oo waxay wax la wadaagayaan caruurtayda, waayoo maalka iyo hantida aan haysto ayaa ku filan dhammaantood raashinka ay cuni lahaayeen".
Cumeyr wuxuu Rasuulka (scw) ku yiri: "Rasuulkii Ilaahayow waxaan ahayn kuwii kugu beeniya waxyiga xagga samada lagaaga soo dejiyay (waa qur’aanka), hase ahaatee arrinkan aad hadda ka warantay ee ahaa wixii aan ku wada hadalnay anniga iyo Safwaan cid aan labadeyda ahayn ma ogeyn. Wallaahi ayaan ku dhaartay waxaan yaqiinshay inuusan warkan kuu keyn axad aan ka ahayn Ilaahay. Waxaa mahad iska leh Allihii i waafajiyay inaan kuu imaado, si markaas aan u qaato Diinta Islaamka. Cumeyr wuxuu ku dhawaaqay shahaadada, sidaasna ayuu ku islaamaay.
Muslimiintii oo ku farxay islaamiddii Cumeyr. Nebiga (scw) wuxuu asxaabta amray inay Cumeyr baraan Diinta iyo barashada qur’aanka, isla mar ahaantaana ay u sii daayaan wiilkiisa Wahab. Muslimiintii si aad ah ayeey ugu farxeen islaamidda uu soo islaamay Cumeyr, ilaa uu Cumar Binu Khaddaab (rc) ka yiraahdo "Doofaar ayaan ka jeclaa kolkuu Cumeyr u galayay Rasuulka!, laakiin maantase waxaan ka jeclahay qaar ka mid ah caruurtayda. Wixii intaa ka danbeeyay Cumeyr wuxuu baran jiray Diinta Islaamka, isagoo markaasna laabtiisa ku buuxinaya iftiinka qur’aanka. Cumeyr waxay la ahayd maalmahaas uu baranayay qur’aanka maalmihiisii ugu qaalisanaa intuu noolaa, taasoo hilmaansiisay magaaladii Makka ee uu markii hore ka yimi iyo dadka ku noolba.
Dhinaca kale Safwaan wuxuu ahaa kii naftiisa ugu sheekeeya yiddidiilooyin, aan waxna ka jirin, isagoo dadka ku oran jiray "ku bishaareysta khabar weyn oo idin hilmaasiisa dhacdadii dagaalkii Badar. Hase ahaatee markii ay ku dheeraatay Safwaan maqnaashaha Cumeyr, ayaa wuxuu bilaabay welwel iyo walaac; isagoo weydiin jiray socotada ka soo gasha magaalada Madiina. In kastoo oo uu saas ahaa, haddana ma uusan heli jirin wax jawaab ah oo shaafisa. Maalintii danbe ayaa waxaa magaaladii yimi nin, kaasoo sheegay inuu Cumeyr islaamay. Safwaan, khabarkaas waxay ku noqotay mid lama filan waa’. Waayo, Safwaan marnaba ma filanaynin in Cumeyr uu islaami doono, haba islaamaan’e waxa dunida jooga oo dhan.
Daabacaad: Isniin May 15, 2000